Jamboard: Ngosiputa Ngosipụta nke 4K jikọtara ya na Ngwa Google | Martech Zone
Jamboard: Ngosiputa Ngosipụta nke 4K jikọtara ya na Ngwa Google
Tọzdee, Disemba 7, 2017 Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Douglas Karr
Ọ bụghị kwa mgbe na m na-ede banyere ngwaike, ma afọ gara aga cohosting na Ihe ngosi Dell pọdkastị meghere anya m n’ezie na ngwaike nke nwere arụpụtaghị ihe, arụmọrụ ya, na ihe ọhụrụ. Ọ bụ ezie na anyị na-abanye ma na-apụ na ngwanrọ kwa ụbọchị - ngwaike dị na igwe ojii na tebụl anyị na-agbanwekwa nzukọ anyị.
Site na uto nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, imekọ ihe ọnụ na-aghọ ihe dị mkpa - yana G Suite na-aza na Ogwe osisi. Jamboard bụ ngosipụta 4k nke na-enyere ndị otu aka ịsepụta echiche ha, dobe onyonyo, tinye ndetu, wee dọpụta ihe ozugbo na weebụ ebe gị na ndị otu nọ na-emekọ ihe. Nke kachasị mma, ike gị nwere ike iji ọtụtụ Jamboards ma ọ bụ ngwa Jamboard na ekwentị ma ọ bụ mbadamba (android or iOS).
Jamboard ahụ ọrụ -enye ohere G Suite admins iji jikwaa ngwaọrụ Jamboard ha, ma nyere ndị ọrụ G Suite aka ịmekọrịta ọdịnaya jam na ha ekwentị, mbadamba, ma ọ bụ na web. N'ime izu ndị na-abịanụ, ọrụ Jamboard ga-abụ isi ọrụ G Suite.
Google chere n'echiche banyere ihe niile, site na igwefoto dị obosara, igwe okwu dị iche iche, na-ekwe ka ihe emetụ aka 16 n'otu oge, aka aka na ọdịdị ọdịdị, yana ọbụlagodi mkpịsị akwụkwọ na nchicha na-achọghị mmakọ.
Jamboard na-amalite na USD $ 4,999 (gụnyere ngosipụta 1 Jamboard, 2 stylus, 1 eraser, na 1 mgbidi ugwu) tinyere ụgwọ $ 600 kwa afọ na ego nkwado.
Lelee Jamboard Budata ụdịdị Jamboard
Tags: 4kmmekota ngosiG Suitegoogleiosmbadambamobile ngwambadamba
Isi ihe dị mkpa na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ọma nke Ọma